Finfinnee, Muddee 16,2010 -Koreen qophii fiigicha guddaa "Lammii Koof Nan Fiigaa" Mudde 22,2010tti Finfinneetti gaggeessuuf beellama qabatee ture guyyoottan hin murtoofneef dabarfamuu isaa beeksiseera.
Fiigicha guddaan kun Waldaa Atleetota Oromootin lammiilee naannoo Somaaleerraa qa'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'an deeggaruuf kan qophaa'e ta'uun isaa ni beekama.
Koreen qophii figichichaa ibsa har'a laaten akka beeksisetti guyyaan fiigichaa sababoota humnaa ol ta'aniin dabarfameera.
Lakkoofsi namoota fiigicha kanaaf galmaa'an karooraan ol baay'achuu isaarraan kan ka'e baay'inni tiishartii qophaa'e kumni 50ni ga'uu waan dideefi jedhameera.
Fedhii kana guutuuf maxxansa tiishartii dabalataatif ammoo yeroo fudhateera.
Dabalataanis, ispoonsaroonni guyyichi akka dabarfamuuf gaafataniiru.
Tiishartoonni hanga yoonaa maxxanfamanii ba'an godinaalee,magaalotaa fi biiroleef guyyaa har'aarraa kaasee raabsun jalqabameera.
Kanas Waajjiraalee Dargaggoo fi Ispoortii godinaalee fi magaalotaarraa bitachuun akka danda'amu korichi ibseera.(FBC)
More in this category: « Bulchiinsi Magaalaa Adaamaa adda-babayiiwwanii fi daandiiwwan magaalattii keessaa maqaa moggaase Ityoophiyaatti proojaktiin dandamannaa hongee horsiisee bulaa Birriin miiliyoonni dhibba 4 oliin hojjetamaa jira »
Torbe Kana 51382
Ji'a Kana 91623
01/05/07 irraa eggalee 8190778
Kan Amma Daawwachaa Jiran 31